ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “တခါတုန်းက ရလွတ်ပလွတ်”
ကို ပေါ ၊ မအိပ်ေ သး ဘူး လား ။ ဇွဲ ကောင်း လှ ချည် လား ။ တနေ့ တစ် ပုဒ် လောက် တင် စေ ချင် ပါ တယ် ။
ဆိုလိုရင်းကိုလဲ သဘောကျတယ် ...
ကျန်မောင်နှမတွေရဲ့ အဖြေကို ကျနော် နားလည်သလိုပြောရရင် (ဟဲဟဲ...ဂျင်ဝက်ရဲ့ အထာပေါ့။) အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
"အစ်ကိုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျနော်တို့ အာဃာတတွေ ထားမနေတော့ပါဘူး အစ်ကိုရယ် (ထားလည်း ဘာထူးမှာမို့လဲ။ စိတ်ပင်ပန်းတာပဲ အဖတ်တင်မှာပေါ့။)။ အဲဒီတော့ အစ်ကို စိတ်အေးလက်အေးသာ နေပါ။ အိမ်လခတော့ မှန်မှန်ပေးပေါ့။ လာလာ အစ်ကိုနေရမယ့် ကျနော်တို့တိုက်ရဲ့ နောက်က တဲလေး အခု လိုက်ပြမယ်။"
Couldn't find words to cheer Ko Paw's wit for this perfect satirical work! Indeedatimely, well-thought post!
ကိုပေါရေ ရီလဲရီရ သဘောလဲကျပါ့။
ရီရတယ် ကိုပေါ ..
မြတ်လေး ရုပ်ရှင်တကားလို ပိတ်ကား ၂ ခြမ်း ခြမ်းပြီး။ ဇာတ်သိမ်း ၂ ခု သိမ်းကြည့်ရအောင်။
ဒါက နောက် ဇာတ်သိမ်း တခု ..
ထင်ရာစိုင်းလဲ သေရော၊ ဟိတ် ငါကတော့ ထင်ရာစိုင်းညီ အာလူး ပဲ။ ငါ့အကိုကြီး မယား ဂွက်ထော်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ငါ့တာဝန်ထား။ ငါသေရင်လည်း မပူနဲ့ ငါ့ညီ တုတ်ကြီးတို့ ရှိသေးတယ်။
(စိတ်တော့ မဆိုးနဲ့ ကိုပေါ။ ဒီလိုရေးရတာက ရှင်ဂွက်ထော် သားသမီးတွေက ထင်ရာစိုင်း အန်ဖတ်ဆို့ သေတာကို ထိုင်စောင့်နေကြတယ် ဆိုတာကိုး။ တကယ်ဆို ထင်ရာစိုင်းကို ရိုက်ထုတ်လိုက်ကြတယ်လို့ ရေးပါလား ခင်ဗျာ။ ဒါဆို သူ့ညီတွေလည်း ဘယ် လာရဲတော့မလဲ။)
Anonymous (August 22, 2009 7:41 AM),
အင်း.... အဲဒီ ဇာတ်သိမ်းမျိုးလည်း ဖြစ်မလာဘူး ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။
သေချာတာကတော့ သားသမီးတွေ အားလုံးက မကျေနပ်ကြဘူး။ အင်အားနည်းနေသေးလို့ မလှန်နိုင်သေးတာ။ အရွယ်ရောက်လာလို့ ကာယဗလနဲ့ ပြည့်လာပြီဆိုရင် “ထင်ရာစိုင်း”ကို ၀င်ကာပိုင်း တာမျိုးလုပ်ချင်လုပ်ကြမှာပေါ့။ အချိန်မကျခင် ထင်ရာစိုင်း အန်ဖတ်ဆို့သွားရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးက သက်ဆိုးတော့ရှည်တတ်တယ်ဗျ။း-)
ကိုပေါရေ...ထင်ရာစိုင်းကိုသေဖို့ထိုင်စောင့်ရင်းနဲ့ ထင်ရာစိုင်းပထမ မယားပါမြေးလေးတောင် ထင်ရာစိုင်းနေရာယူဖို့တကဲကဲလုပ်နေတာ အရွယ်ရောက်နေပီ...
ဗညားပိစိ အာတာလွတ်မြို့ ကို ထွက်လာတဲ့ ဇာတ်ထပ်ဖြည့်လို့ရသေးတယ်။ သူကတော့ အာတာလွတ် သန်းခေါင်စာရင်းလည်း မပြောင်းဘူးတဲ့။ အမေနဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေ ကိုလည်း ငွေကြေးထောက်ပံ့သေးတယ်။ မကောင်းတာ လူတိုင်းသိတဲ့ ထိုင်ရာစိုင်း မကောင်းကြောင်းလဲ လူတိုင်းသိအောင် လှည့်ပြော တတ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကလည်း ထိုင်ရာစိုင်း မသေသရွေ့ ရလွတ်ပလွတ်ကို မပြန်ဘူး ဆိုပဲ။
ဇာတ်ပိုနာချင်ရင် ဗညားပိစိ ပို့ပေးတဲ့ ငွေလေးတွေကို ထိုင်ရာစိုင်းက အရက်သောက်ပစ်တယ်။ ပိုက်ဆံမပေးရင် သူ့အမေကိုရိုက်ဖို့ ကြိမ်လုံးတောင် အဲဒီငွေနဲ့ပဲ ဝယ်တယ်လို့ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါဦး။
(တကယ်က ဇာတ်ကောင် တယောက် ထပ်ထည့်ချင်တာ ပေးစရာ နာမည်က "အာဖျံကွီး" ပဲကျန်တော့တာ။ အဲဒီ နာမည်တော့ မပေးချင်တာနဲ့။ ဗညားပိစိကို နောက်တစ်မြို့ ပို့လိုက်ရတယ်။)
I believe there is another kind of "အလကားကျော်စွာ", who has to leave "ရလွတ်ပလွတ်ရွာကလေး" for "တောင်ပုလုမြို့" for his career and financial reasons. Later, he has decided to stay asaso-called citizen in "တောင်ပုလုမြို့" because he cannot practise his profession honestly and liveacomfortable livestyle in his mother land. Anyway, his heart stays in his mother land, and he never hesitates to offer his help to the family of "ရှင်ဂွက်ထော်" and contributes, in his best capacity, for the betterment of "ရလွတ်ပလွတ်ရွာကလေး". I believe there arealot of this kind of "အလကားကျော်စွာ" out there. Can we and should we dub them as "quitters"?
All in all, loving one's country is not about holding its passport. It is something in our hearts and minds, and no one but ourselves can change this. To me, I have not thought of taking SG citizenship till now, and I intend to raise my son asaBurmese to my best extent. However, if our children have to decide for their education, career and financial well-being one day and the chasm of opportunities between SG citizens and PRs becomes too wide, I will leave the decision to them and I won't dub them as "quitters".
သဘောကျတယ်ကိုပေါရေ။ စကားမစပ် ခိုးချတာတွေ များလှချည်လားငှင်။ ခွိခွိ။
သားအကြီးဆုံးကတော့ မောင်နှမတွေ လက်မခံဘူးဆိုတာ သေချာသိသွားရင်..
ရှေ့ ရေးအတွက် တခြားမြို့ ရွာမှာ ပရိုပိုဆယ်တင်ပြီး